SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Hagaajinta xaafadda | WSDOT
SR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b) – Hagaajinta xaafadda
homeConstruction & planningOnline open housesSR 509, I-5 ilaa wadada 24th Ave S – mashruuca wadada dagdagaa heerkiisa koowaad b(stage 1b)Hagaajinta xaafadda
Si loo dhimo saamaynta dhawaaqa, waxaanu dhisaynaa darbiyo cusub oo dhimo sanqadha kuwaas oo bedelaya ama waxkudaraya gidaarada buuqa ee jira ee aagga mashruuca. Afar darbi oo sawaxan dhin ah oo hadda jira ayaa la fidin ( waxlagudari)doonaa ama la beddeli doonaa dhinaca waqooyi ee wadada I-5, iyo hal darbi oo sanqadh dhin cusub oo laga dhisi doonaa dhinaca koonfureed ee I-5. Waxaan sidoo kale ka dhisaynaa barbi moos ah dhinaca waqooyi ee wadada SR 509.
Darbiga qaylada ee 1waad
Darbigan qayla dhinka ahi waxa uu dheereynayaa gidaarka jira ee ku teedsan dhinaca waqooyi ee I-5 ilaa meel koonfur kaxigta iswaydaarka wadada SR 516 ee u dhow Waddada Jeffery Rd . Iyada oo la eegayo dhererka dhulka ee aag kasta, waxay noqon doontaa darbigu 10 ilaa 20 cagood oo dhereka taagan ah iyoilaa 1,100 cagood oo dhererka jiifka ah.
Darbiga qaylada ee 2baad
Darbigan sawaxanka ama qeylada waxa uu bedelayaa gidaarka qaylada ee ku teedsan dhinaca waqooyi ee wadada I-5 oo dhanka koonfureed ka xigta buundada South 216th Street. Derbiga hadda jira waxa uu u baahan yahay in meesha laga saaro si boos loogu helo buundada cusub ee South 216th Street. Iyada oo la eegayo dhererka dhulka ee aag kasta, waxay noqon doontaa 8 ilaa 15 cagood oo ah dhererka toosan iyo 700 cagood oo dhererka jiifka ah.
Darbiga qaylada ee 3xaad
Darbigan sawaxanka ah waxa uu bedelayaa qaybo ka mid ah gidaarka qaylada ee jira ee ku teedsan dhinaca waqooyi ee wadada I-5 oo dhinaca waqooyi ka xigta Buundada South 216th Street. Qayb ka mid ah darbiga hadda jira ayaa loo baahan yahay in meesha laga saaro si boos loogu helo buundada cusub ee South 216th Street. Iyada oo ku xirantahay ama la eegayo dhererka dhulka ee aag kasta, waxay noqon doontaa 8 ilaa 20 cagood dhererka toosan , dhinaca dhererka jiifana ilaan 1150 cagood.
Darbiga qaylada ee 4raad
Darbigani waxa uu ku fidinayaa ama wax ku darayaa gidaarka sanqadha ee jira ilaa 850 cagood oo dhinaca waqooyi u socda wadada I-5 marka laga bilaabo halka uu hadda ku dhamaado ilaa iyo wadada S 208th Street. Iyadoo lagu saleynayo dhererka dhulka aag kasta, waxay noqon doontaa 10 ilaa 15 cagood.
Darbiga qaylada ee 5naad
Kani waa darbi cusub oo sanqadh celiye ah oo ku teedsan dhinaca koonfureed ee I-5 inta u dhaxaysa wadada S 204 street iyo S 208 street. Iyada oo ku saleysan dhererka dhulka mid kastaa, wuxuu noqon doonaa jooga 10 ilaa 15 cag dhererkiisuna wuxuu noqon doonaa ilaa 1,250 cagood.
Darbi wax xajiya
Kani waa darbi cusub oo ku teedsan dhanka waqooyi ee wadada SR 509 una dhaw wadooyinka 31st iyo 32nd Lane South. Iyada oo ku saleysan dhererka dhulka aag kasta, waxay noqon doontaa jooga 5 ilaa 15 cagood, dhererka waxayna noqon doontaa ilaa 1,000 cagood.
Darbiyadan sawaxanka reeba waxa ay dheeri kuyihiin dhawr kun oo cagood oo darbi cusub oo sanqadh reeb ah oo ay Sound Transit iyo WSDOT hadda ka dhisayaan dhinaca koonfureed ee wadada I-5 inta u dhaxaysa Veterans Drive iyo South 216th Street, taas oo qayb ka ah mashruuca tareenka fudud ee lagu gaadhsiinayo magaalada Federal Way.
Dadka ku nool hareeraha I-5 ee u dhow darbiyada qaylada reeba waxay filan karaan shaqaalaha oo ka shaqeeya meel u dhow guryahooda marka ay diyaarinayaan goobta shaqada (jarita geedgaabka iyo geedaha kale), marka ay dhisayaan derbiyada qaylada, dejiyaan shubka iyo tiirarka darbiyada qeylada reeba, iyo marka goobta shaqada si caadi ka dhigayaan.Inta uuna dhismaha billaaban Kahor , kooxda mashruucu waxay guri-guri booqasho ugu samayn doonaan xaafadaha ay dhismuhu saameynayaan si ay u bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan dhismaha gidaarka buuqa.
Dhismaha darbiyada qaylada waxay dhici doonaan saacadaha iftiinka maalinta ee u dhexeeya badhtamaha 2022 iyo dabayaaqada 2023
Maadaama gelitaanka Waddada South 208th ay noqon doonto mid xaddidan sababta oo ah buundada cusub ee SR 99, qandaraaslahayagu wuxuu ka dhisi doonaa waddo cusub oo ah 34th Avenue South inta u dhaxaysa South 208th Street iyo South 204th Street si loo hubiyo in dadka degan aagga ay si buuxda u galaan ama uga baxaan xaafadooda. Anagoo la kaashanayna Magaalada SeaTac, qandaraaslahayagu wuxuu sidoo kale ku samayn doonaa hagaajinta South 208th Street oo ay ku jiraan kor uqaadida tamarta, Marshabiyeediyo cusub, iyo geedaha dariiqyada. Ma jiri doono baarkin wado oo ku taal 34th Avenue South ama South 208th Street marka dhismuhu dhamaado.
Labada waddo ee S 208 Street waa la hagaajin doonaa iyadoo loosameyndoono marshabiyyedyo cusub, qarar iyo biyoshub, iyo geedo.
Waxaan dhisi doonaa wadada cusub ee 34th Avenue South ka hor inta aan shaqada laga bilaabin South 208th Street si aan u siino marin dheeri ah oo loo galo Xaafada Madrona inta lagu jiro dhismaha. Dadka deegaanku waxay filan karaan xannibaado baarkin iyo xidhidh leemanka inta uu dhismuhu socdo, laakiin marin ay dadku maraan mar walba waa la bixin doonaa.Inta uuna dhismaha billaaban Kahor , kooxda mashruucu waxay guri-guri u booqasho ugu samayn doonaan xaafadaha ay dhismuhu saameyey si ay u bixiyaan macluumaad badan oo ku saabsan hagaajinta waddooyinka.
Waxaan bilaabi doonaa dhismaha wadada 34th Avenue South dabayaaqada 2022 waxaana dhameystiri doonaa horaanta 2023. Dhismaha 208th iyo 204th wuxuu bilaabmi doonaa bartamaha 2023 wuxuuna dhamaan doonaa dhamaadka 2023. Dhismuhu wuxuu dhacayaa saacadaha dharaarta